ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउनुहुन्छ ? ज्यान जाला « Himal Post | Online News Revolution
ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउनुहुन्छ ? ज्यान जाला
प्रकाशित मिति : २०७३, ४ फाल्गुन १९:१७
प्रविधिको युगमा मोबाइल एक अत्यावश्यक वस्तु बनेको छ । ट्वाइलेट वा बाथरुममा हुँदा फोन प्रयोग गर्ने धेरैको बानी हुन्छ । यदि तपाईमा पनि यस्तै बानी छ भने अब त्यसो नगर्नुहोस् ।